07/12/2018 admintriatra Tresaka 0
Tapitra niresaka ny fisamborana ilay mpanao kidnapping Karàna avokoa ny hainoamanjery, afa-tsy ireo gazetin’i Mamy Ravatomanga (La Vérité, Inona no Vaovao), ny gazetin’i Naina Andriantsitohaina (Les Nouvelles, Taratra), ary ny an’i Lalatiana Rakotondrazafy (Freenews). Nahoana angaha?
Dia hilaza ve izany ny La Vérité, Taratra, Les Nouvelles, Inona no Vaovao ary ny Freenews, fa tena tsy nahita io vaovao mikasika ny fisamborana ilay mpanao kidnapping mihitsy ireo mpanao gazety kalaza amin’ny “faits-divers” ao amin’izy ireo? Tsia avy hatrany no valiny. Misy mpanao gazety matihanina tokoa ao amin’izy ireo, saingy notampenam-bava tsy hamoaka ilay vaovao. Izy ireo indrindra anefa no tena mpidradradradra ny fahalalahana maneho hevitra, ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, naniraka ireny mpanao gazety nandohalika teny amin’ny Antenimieram-pirenena ireny ny taona 2016.
Nahoana no “manivan-tena” tahaka izao e? Efa tsy andron’ny sivana intsony nge izao ry Naina Andriantsitohaina sy Mamy Ravatomanga ary Lalatiana Rakotondrazafy e! Mba mila mahazo vaovao feno sy ara-potoana araka ny voalazan’ny Lalàm-panorenana ny mpamaky ny gazetinareo, koa nahoana no afenina aminy ny fisian’io mpanao kidnapping voasambotra io? Nahoana no tsy miresaka mikasika ilay raharaha any Frantsa momba an’i Mamy Ravatomanga mihitsy ianareo, sa izany indray no fomba vaovao amin’ity asa fanaovan-gazety ity?
Homamiadana mikiky ny firenena ny kidnapping, ary tamin’ity governemanta MAPAR ity no tena nandrenesana tranga mampihorin-koditra tahaka ny tetsy amin’ny Assist Ivandry. Fa vitan’ireo hainoamanjery MAPAR ny manao sivana tsy mamoaka izany vaovao izany satria MAPAR ilay mpanao kidnapping. Koa aoka tsy hiteny na hiloa-bava izany fahalalahana maneho hevitra sy fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety izany intsony rehefa “manivan-tena” tahaka izao. Maromaro mantsy ireo tsy mahatelin-kanina any ambadika any, taorian’ny fisamborana ity MAPAR mpanao kidnapping ity, izay fianakaviana lohan’ny mpisorona ao amin’ny MAPAR rahateo. Marihina fa misy olona malaza be izay, lasa “garde du corps”-n’ny sasany, voarohirohy tamin’ny resaka kidnapping tany amin’ny taona 2005 tany, ka voatery noroahina niala teto.
Mbola mitana ny sain’ny maro, indrindra ireo mpanara-baovao ara-politika ny seho ataon’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ka nampahafantarany ny « Madagasikara misandratra 2030 ». Mbola nanamafy io vina io izy, ary nametraka fa hiainga amin’ny harena ...Tohiny